OweGenerations ulindele ingane yesine nesoka alithole ngonyaka odlule | News24
OweGenerations ulindele ingane yesine nesoka alithole ngonyaka odlule
Johannesburg – Uma ngabe ubuzibuza ukuthi kungani ungasamboni uTshidi kwiGenerations - The Legacy egqoke izinto eziveza umzimba nezishiya abesilisa benconsa amathe, yingoba kukhona osekukhulakhula esiswini.
Lo mlingisi, ogama lakhe langempela u-Letoya Makhene, ulindele ingane nesoka lakhe, uTshepo Leeuw, nahlangana naye ngonyaka odlule. Lena kuzobe sekuyingane yesine yalo mlingisi ophinde abe yisangoma. IMove!ingakudalula ukuthi uLetoya usenesikhathi ekhulelwe kanti futhi ulindele ukubeletha maduzane.
Umthombo ongaphakathi lapho kudidiyelwa khona lo mdlalo oyintandokazi uthi kwindawo ayidlayo uLetoya, uTshidi, angeke esagqoka izinto eziveza umzimba kulo mdlalo ngenhloso yokufihla isisu sakhe. “Uhlale egqokise okukagogo ngenxa yokukhulelwa,” kusho umthombo ongaphakathi.
OLUNYE UDABA: IZITHOMBE: Abalandeli bathakasele izithombe zomlingisi egqoke i-bikini eThekwini
Omunye umthombo uthi uLetoya ujabule uyafa ngalokhu kukhulelwa kwakhe futhi utshela wonke umuntu ukuthi uTshepo uzoba ngubaba omuhle ezinganeni zakhe ezintathu. Ngaphambi kokuba ahlangane noTshepo, uLetoya ubeshade noPriviledge Mangezi, namsola ngokuthi uyahlukumeza.
Ngesikhathi iMove! ihalalisela uLetoya ngokukhulelwa kwakhe, ube nokuxwaya ngokuthintwa kwakhe. “Yiliphi leli phephandaba? Anginaso isiqiniseko ngokuthi kumele ngiqinisekise noma ngiphike into. Angikaze ngakuqinisekisa lokho okhuluma ngakho kunoma ngabe ubani, ngakho angeke ngikwazi ukukhuluma ngakho manje,” usho kanjalo.
Ngaphambilini kwabikwa ukuthi uLetoya, ophinde abe ngumculi, washiya isitebele somculo, iMabala Noise. Kodwa-ke iMenenja yeMabala Noise, uSikhulile Nzuza, uthi uLetoya usengumculi wabo. “Useyingxenye yethu futhi akakezukuya ndawo okwamanje,” kusho uSikhulile.